ထိုဥယျာဉ်ကိုမစင် fertilize ဖို့ဖြစ်နိုင်
မူလက Kent ထံမှ: သိုးရွမ်နားမှာ
မျိုးစုံ၏ဖော်ပြချက်, ဓါတ်ပုံ, ဝိသေသလက္ခဏာများ: အစောပိုင်းစပါးရိတ်ရာကာလ, စက်ရုံ "Ariel" အာလူးလိုအပ်ပါတယ်
Adromiskus - မိသားစု Crassulaceae ၏သေးငယ်တဲ့အံ့ဖွယ်
နူးညံ့သိမ်မွေ့သောမွှေး phalaenopsis Liodoro
ဖော်ပြချက်နှင့်ဓာတ်ပုံနှင့်အတူ daylilies ၏မျိုးပေါင်းခွဲခြား
ဥယျာဉ်တော်၌ရှ lilac စိုက်ကြီးထွားဖို့ကိုဘယ်လို
စတော်ဘယ်ရီစိုက်ပျိုးရေး "Chamora Turusov": အ berry သီး၏စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
- အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု -
Impatiens: အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက် Bloom အရမ်းလေးစားမိပါတယ်မှအပင်များရေလောင်းခြင်းနှင့်အစာကျွေးရန်မည်သို့မည်ပုံ?
အဘယ်အရာကို Rocambole ဖြစ်ပြီးဘယ်လိုဧရိယာထဲမှာကြီးထွားဖို့
Primrose ဥယျာဉ် - အလှဆုံးနှစ်ရှည်များထဲမှ
သစ်တော်သီး၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနှင့်ဆောင်းရာသီ Hardy မျိုးပေါင်း "Hera": ဖော်ပြချက်များနှင့်ဓာတ်ပုံများ
ဆောက်လုပ်ရေး Golubyatnikov: အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်
ဥယျာဉ်တော်ဘဏ္ဍာကို - ပျိုးပင် verbena မျိုးစပ်။ ပွင့်လင်းမြေပြင်, စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဝါဒဖြန့်အတွက်စပါးစိုက်ပျိုးချိန်
အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications: အသုံးပြုသော calendula အဖြစ်
ROOM တွင် boxwood: အစောင့်ရှောက်မှုနှင့်စိုက်ပျိုး
မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းနွားမ (ခြောက်သွေ့တဲ့နွားမ): အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသရေး
မိမိဥယျာဉ်အတွက်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်သစ်တော်သီးအမျိုးပေါင်း Lada အပေါ်ထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များ
ယို Manchurian walnut ၏စာရွက်
Rhododendrons ၏လူကြိုက်အများဆုံးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ-Hardy မျိုးပေါင်း
ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အဘယ်ကြောင့် shell ကိုကြက်ဥ
ကဖြစ်ပျက်များနှင့်မည်သို့အထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှုယူနစ်လုပ်ဆောင်သွားရန်အဘယ်ကြောင့်: အမြစ်များမရှိဘဲသစ်ခွ အကယ်. ?
သစ်ခွ - တစ် finicky စက်ရုံတက်ကြွစွာအိမ်တွင်ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တချို့အသစ်ရောက်ရှိလာသောကြောင့်ပန်းပွင့်သေဆုံးဖို့အစပြုရာ၏, မှားယွင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို၏နံပါတ်ပါစေ။ အဆိုပါ lamina ပိုပြီးနေ့စဉျနွမ်းလျှင်, ဒီများအတွက်အကြောင်းပြချက်အမြစ်စနစ်၏အသေခံခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လျှင်ဤပြဿနာကိုမှအဖြေ, အစွန်းရောက်လုပ်ရပ်များမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
အိမ်မှာငှက်ကုလားအုတ်ကြက်ဥထိုပေါက်ဖွားအပေါ် Professional ကအကွံဉာဏျ
ငှက်ကုလားအုတ်ကြက်ဥပေါက်ဖွား - တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲအမြတ်အစွန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ အတုပေါက်ဖွားဖို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျန်းမာ Full-စုံတဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုအရစီမံခန့်ခွဲ။ ရိုးရှင်းဖြစ်စဉ်ကိုထိုပေါက်ဖွားထိုကဲ့သို့သောမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမယ့်အပေါင်းတို့, စည်းမျဉ်းများနှင့်အကြံပြုချက်များမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအထူးအာရုံစိုက်တို့နှင့်ကြီးသောတာဝန်လိုအပ်သည်။
နွေရာသီတံစဉ်များကိုစပျစ်သီးဒီစက်ရုံအတွက်စောင့်ရှောက်မှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနွေရာသီအတော်လေးတိုတောင်းများမှာဘယ်မှာသူတို့အားဒေသများဘို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်နှင့်စပျစ်သီးကိုအကောင်းဆုံးတှငျရငျ့မှညျ့အတှကျလုံလောကျနေရောင်ရတဲ့ကြသည်မဟုတ်။ ငါကဤဖြစ်စဉ်ကိုသိသိသာသာအရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သီးနှံ၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသည်သောနွေရာသီ၌တည်ရှိ၏နွေရာသီကွဲပြားအားသာချက်တံစဉ်များကိုစပျစ်သီးထဲမှာစပျစ်သီးကိုခုတ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်လျော်သောရေလောင်းပျိုးပင်ကောင်းကြီးထွားမှုအတွက်အလွန်အရေးပါသည်: အပင်က၎င်း၏စိုက်ပျိုးမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မျက်နှာပြင်နှင့်အလွန်အကျွံရေလောင်းနှစ်ဦးစလုံးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Uncomplicated ကိစ္စတွင်ဂရုတစိုက်ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ သခွားသီးသခွားသီး၏ရေလောင်းပျိုးပင်ပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါကကသူတို့ကိုအစာကျွေးရန်လိုအပ်ပါသည်နှင့်တောင်ကုန်းငှါ, နောက်ထပ်အမြစ်များမှကျေးဇူးတင်စကားအပင်အတွက်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ရာသီကာလအတွင်းမကြာခဏရေလောင်း, အကြိမ်ပေါင်းများစွာလိုအပ်ပါတယ်။
ပိုးဟပ်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲမကြာခဏအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်လာသည်။ ဤရွေ့ကားမနှစ်မြို့ဖွယ်အိမ်နီးချင်းများသူတို့အရှုံးမပေးနဲ့မကြာသေးမီကသည်အထိအသက်တာကိုမှတွယ်ကပ်မအလွန် Hardy နှင့်တီထွင်ခဲ့တယ်ဖြစ်ကြသည်။ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပိုးဟပ်၏ကိုလိုနီဖျက်ဆီးဖို့ကျနော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးရှိသည်! မာရုန်းကန်ခုနှစ်တွင်လူကိုမကြာခဏမူးယစ်ဆေး Regents ကူညီပေးသည်။ ဒီ tool ကဘာလဲ?
အဘယ်အရာကို croton ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းအရွက်လျှင်?
Croton ကြီးထွားသူကိုစိုက်ပျိုးသူများ, ပြုတ်ကျအရွက်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခု၎င်း၏ကုသမှုနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအဖြစ်ကဒီစက်ရုံ၏စိုက်ပျိုးမှု၏ပရိယာယ်အချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းအဘယ်အရာကိုကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့် croton အရွက်တို့သည်ညှိုးနွမ်းနဲ့ off လဲကြ, croton (codiaeum) လုပ်နေတာနေစဉ်အပူပိုင်းသစ်တောတွေထဲမှာကြီးထွားလာကြောင်း။
စပျစ်သီးပေါ် WASP နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကဘယ်လို
အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများကညွတ်: လျှောက်လွှာများနှင့် contraindications
ဖော်ပြချက်, အာလူးအမျိုးပေါင်း Kiwi စိုက်ပျိုး၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အင်္ဂါရပ်
ယုန်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်စောင့်ရှောက်မှု၏အင်္ဂါရပ်များ Marder သားကိုမွေး
"Leghorn ကြက်သား": ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကြက်၏ဖောက်၏ဖော်ပြချက်